Kodwa ngisho noma uthola izinkulungwane zezivakashi ngosuku，ngeke kusize ibhizinisi lakho uma engeengeho walaba bafundi abaphenduka amakhasimende.
Ngokuqinisekile，ukunakwa kuhle，kodwa awusizo ibhizinisi ukuze uthabatheke。 Awubhulogi ukujabulisa-ubhulogi ukuze ukhule ibhizinisi lakho!
Ngakho-ke uvula kanjani labo bafundi abazithandayo kuba amakhasimende akhokhelayo？纳粹AMA-7阿玛钦加·奥科洪科洛.
1 I-1。 Bhala amabhulogi ebhulogi aphendule ngokuqondile Izimpendulo
2 I-2。 Ukuqeda iziphazamiso
3 I-3。 Cela Abafundi Bakho Ukuthenga
4 I-4。 Thengisa Nge-imeyili Yakho Uhlu
4.1 伊苏鲁兹（Ithuluzi elihlukile）
I-1。 Bhala amabhulogi ebhulogi aphendule ngokuqondile Izimpendulo
Uma ubhalisela ibhizinisi，uyazi ukuthi udinga ukubhala okuthunyelwe okubhekiswe kuwe umuntu wokuthenga ukuze ukwazi ukuheha abafundi abafanele.
Abanye balaba bafundi bangaba nesithakazelo ekuthengeni，科德贝贝贝nokubhuka okunye.
I-TOM BIHN inomsebenzi owusizo wokunqoba ukuphikisana kwentengo ku-常见问题解答
Ingabe Lokhu kuyintengo engcono kakhulu kulo mkhiqizo，noma ngingayithola ithibhe kwenye indawo?
Izikhalazo ezithile zizohluka kakhulu kuye ngokuthi ibhizinisi lakho，kodwa zihlale zikhona.
Ukuze uthole ukuthi yini egcina izilaleli zakho zingathengi，zama ukwenza ucwaningo noma izingxoxo zomuntu ngamunye ngamakhasimende akho namakhasimende akho wamanje.
Bese ubhala izikhala zebhulogi eziqondisa ngqo lezi zikhathazo：
"Isibonelo A与Isibonelo B：Yikuphi Okuhle Kuma-SAHMs / Abasebenzi Abaqashi / njll?"
"Indlela Ukusebenzisana Kwako Nokuphepha Kanjani Ukugcina Imininingwane Yakho Iphephile"
"Izizathu ze-7 Akufanele Ungizuze" （Lesi sihloko sokuthunyelwe，isihloko esibi sizoheha ukuchofoza ngenkathi okuqukethwe kuzokhipha amaklayenti afanelekile。）
I-2。 Ukuqeda iziphazamiso
Uma ibhulogi yakho ine：
… lezi yizo zonke izingcingo ezenzweni（CTAs）.
Umbhali nomqeqeshi u-Elna Kairo使用iziphazamiso futhi wagxila kwiwebhusayithi yakhe nakwibhulogi kunhloso yakhe ye＃1.
Uma unomgomo webhulogi yakho，kubalulekile ukuthi ugxile kulowo mgomo futhi uwenze kucace kubafundi bakho.
Umlobi Elna Cain wenza umsebenzi omkhulu ngalokhu kwiwebhusayithi yakhe。 Kuyacaca ukuthi umgomo wakhe we-＃1 ukuletha abantu ukubhalisela inkambo yakhe entsha ye-imeyili ngokuqala abalobi bokuzimela。 Indawo yakhe igxile kulowo mgomo nge：
Isakhiwo sekholomu esisodwa（akukho ama-sidesbars），奥贝贝卡·库格西拉
ube香 "免费课程" njengendlela yokukhetha imenyu yokuqala
Uma ubheka iwebhusayithi yakhe，ungabona ukuthi konke kugxile kuleso sihloko se-imeyili。阿齐霍·伊齐普扎扎米索.
Manje，bheka ibhulogi lakho lebhizinisi。 （Qhubeka futhi uvule ibhulogi lebhizinisi lakho kwelinye ithebhu。）
Unayo ibha yecala egcwele amawijethi，izikhangiso，amabheji，nezixhumanisi?
Ingabe imenyu yebhulogi yakho icacile futhi igxile，noma ihlanganiswe?
Ingabe i-100％icacisa ukuthi yini oyifunayo abafundi bakho?
Thembeka ngezimpendulo zakho，福田ucabange ukususa诺玛yini ephazamisa umgomo wakho oyinhloko.
I-3。 Cela Abafundi Bakho Ukuthenga
Kubonakala kusobala，kodwa abantu abaningi banamahloni ngokuziphakamisa.
Kodwa ngempela-abafundi bakho ngeke bazi ukuthi ufuna ukuthi benzeni ngaphandle kokuthi ubacele!
Uma ubhalisa Ngomgomo engqondweni，kubalulekile ukufaka uhlobo oluthile lwekholi esenzweni（CTA）kubhulogi yakho.
Lokho akusho ukuqeda konke okuthunyelwe nge "Siyabonga ngokufunda，Manje 恩加·乌基齐佐·瓦米! "
Ukusebenzisa i-CTA ehlukahlukene kungakusiza ukuba ukhulise ubuhlobo bakho nabafundi bakho，ubagcine bebuya ngokuqukethwe okuningi futhi ekugcineni baphenduke amakhasimende.
Ungasebenzisa futhi ama-CTA ukuze ukhuthaze abafundi ukuba babeke amazwana，babelane ngokuthunyelwe nabangani，bakulandele kuma-社交媒体，njll。 Lezi yizindlela ezinhle zokubandakanya abafundi abaqotho nokwakha izethameli zakho.
Kodwa ukuze uguqule izethameli zibe amakhasimende，ekugcineni udinga ukuzibuza ukuthi zithenge!
I-4。 Thengisa Nge-imeyili Yakho Uhlu
Ukucela umfundi webhulogi engavamile ukuba athenge ngokushesha进入engase iqhube kakhulu uma nje kusayithi lakho ukuthola ulwazi.
Yingakho izincwadi ze-imeyili zinamandla kakhulu。 Ziyindlela enhle yoku：
Ukubhalisa Kwi-newsletter kuyingozi kakhulu，ngokungafani nokunikeza imininingwane yabo yekhadi lesikweletu kusayithi elisha，noma ukusebenzisa imali enkambeni abangaqiniseki ukuthi bayayidinga。 Ukuze uphendule labo abafundi abangajwayelekile kumakhasimende（bese uthola ukuthi bangabalandeli bakho abahle ngempela），麻黄.
Ukuze uguqulwe，Cela abafundi bakho ukuba babhalisele i通讯yakho ye-imeyili ngokufaka amafomu wokungena ekupheleni kwawo wonke amaposi，bese ufaka i-freebie kubhalisile abasha。 Ngcono nakakhulu，faka uchungechunge lwe-autoresponder noma inkambo yamahhala ezokwehlisa ukukhathazeka kwabo，uphendule imibuzo yabo，futhi uqinisekise ukuthi uyabaluleka。 Amathuluzi afana OptinMonster futhi GetResponse kuhle kakhulu ngalokhu.
Uma ufuna ithuluzi elihlukile ku-OptinMonster ne-GetResponse，i-Convert Pro yyona inketho.
Kuyiqiniso elifakazelwe ukuthi amabhizinisi ama-blog athola ithrafikhi enkulu kunalawo angawatholi. Kodwa nISHo noma uthola